Suldaan Khaalid oo soo dhoweeyey xisbiyada 8 Nov 8, 2012 - 7:01:20 AM
Gobolka Bari ayaa waxa ka soo baxayay dhowaanahan baaqyo iyo taageero la siinayo dowladda Puntland iyo hirgelida nidaamka axsaabta badan ee Puntland u gudubtey.
Suldaan Khaalid Abshir Saalax oo ah suldaanka Beesha Ismaaciil Saleebaan ayaa ugu baaqey dadweynaha iyo shacabka Puntland inay dhowraan midnimadda iyo nabadgelyada Puntland.
alid oo la soo xiriirey Radio Garowe isaga oo ku sugan degmada Xaafuun ayaa si weyn u soo dhoweeyey nidaamka axsaabta siyaasadeed Puntland inay ka hirgalaan ,isagoona meesha ka saarey inaysan marnaba u dooneyn in dib loogu laabto nidaamkii wax ku qaybsiga Qabiilka.
Waxa uu ku baaqey Suldaanku dadka ka soo horjeeda maamulka ama dhaliilsan waxqabadkeeda inay wadada saxda u maraan iyaga oo axsaab furta islamarkaasina sugaan xiliga doorashooyinka ay dhacayaan.
Ugu danbeyntii ayaa Suldaan Khaalid Abshir Saalax ugu baaqey dadweynaha reer Puntland inay ilaaliyaan nabadgelyada iyo xasiloonida ka jirta Puntland si loo dhamaystiro hawlaha ka harsan hanaanka siyaasadeed ee cusub.
Dhowaan ayay ahayd markii shirar iyo kulamo lagu taageerayo geedi socodka dimoqraadiyada Puntland lagu qabtey magaala madaxda gobolka Bari ee Bossaso kuwaasi oo ay ka qaybgaleen bulshada qaybaheeda kala duwan.
Halkan ka dhageyso Axmed Cawil oo wareystey Suldaan Khaalid Abshir